အနောက်ဗာဂျီးနီးယား WIC | JPMA, Inc
တစ်ဦး WIC ရုံးသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တွေ့ပါဖို့ကိုဘယ်လို
ယင်းကိုသုံးပါ "တစ်ဦး WIC ရုံးကိုရှာပါအဆိုပါ WICShopper app ထဲမှာ "ခလုတ်ကို
တစ်ဦး WIC Store ကိုရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
ယင်းကိုသုံးပါ "WIC Storesအဆိုပါ WICShopper app ထဲမှာ "ခလုတ်ကို
တစ်ဦး "WIC ဤတွင်လက်ခံခဲ့သည်" နိမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပါ။
WICShopper - မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ (FAQs)
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: သင် WICShopper app ကိုအကြောင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုတင်သွင်းလိုလျှင်အီးမေးလ်ပို့ပါ WICShopper@jpma.com
Scan ကိုဘားကုဒ်သို့မဟုတ် Key ကို UPC Enter:
Q: ငါအချို့သောအစားအစာများသို့မဟုတ် key ကိုတစ်ဦး UPC number ကိုဝင်ကြ၏နှင့်အချို့သောကွဲပြားခြားနားသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုတွေ့မြင် scan ဖတ်။ သူတို့ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ
Allowed - ဤပစ္စည်းများကိုခွင့်ပြုခဲ့ WIC ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစားအသောက် WIC ခွင့်ပြုခဲ့လျှင်သိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ သိရန်အရာတစ်ခုမှာသင်တစ်ဦးကို item ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်သင့်ရဲ့ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်အတွက်မဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်သင် WIC နှင့်အတူကမဝယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ WIC အကျိုးအမြတ် WICShopper app ကိုလင့်ထားသောသည်အထိ, ဒီ "ခွင့်ပြု" မက်ဆေ့ခ်ျကိုသင့်မိသားစုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, တနှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ပြင်လုံးကိုနို့ရရှိသွားတဲ့။ သင်သည်သင်၏မိသားစုထဲမှာတစ်ဦးတည်းနှစ်အရွယ်ကလေးကရှိမထားဘူးဆိုရင်, မြေတပြင်လုံးနို့သင့်ရဲ့ WIC အစားအသောက်အကြိုးကြေးဇူးမြား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သင်သည်စစ်ဆေးမှုများရပ်တည်ချက်မှာမြေတပြင်လုံးနို့ကိုဝယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
မ WIC ကို item - ဤ WIC ဤအကြောင်းအရာအားအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပေဆိုလိုသည်။ သင် WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်ကိုအကို အသုံးပြု. အသိပေးနှင့်အတူဤအစာကိုဝယ်နိုင်ဖြစ်သင့်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!" ဒီ app ထဲမှာတည်ရှိပါတယ် [HC (3] ။
သိရှိနိုင်ဖို့မအောင်မြင်ဘူး - ဤ app ကိုဘားကုဒ်ကိုဖတ်ပါလို့မရပါဘူးဆိုလိုသည်။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဆိုပါကသင်ဤသတင်းစကားကိုရဖို့ပါလိမ့်မယ်ယင်းဘားကုဒ်ကိုဖတ်ရှုဖို့ app ကိုအဘို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ Key ကိုအဆိုပါဘားကုဒ်ကိုအောက်မှာတည်ရှိပြီး 12-ဂဏန်း UPC number ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ App ကိုအတွက် UPC Enter ကိုလည်းသင်, ခလုတ်ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။
Q: ငါလတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစကင်ဖတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူတို့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးကြဘူးသို့မဟုတ်ခွင့်မပြုအဖြစ်သူတို့တက်လာဖြစ်စေ။ အဘယ်ကြောင့်?
A: ဒီ app လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သတငျးကောငျးသငျသညျအေးခဲအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Q: ဘယ်အချိန်မှာငါ "ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်"? ထိုသို့ကဘာလဲ?
A: "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!"သင်သည်သင်၏ WIC အစားအသောက်အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေတစ်အစားအစာကို item အဆိုပါစစ်ဆေးမှုများရပ်တည်ချက်မှာငြင်းပယ်သောအခါသင်သည် WIC ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်အသုံးပြုတဲ့အခါ, WICShopper app ထဲမှာကျနော်တို့ပြည်နယ် WIC ရုံးမှာအသိပေးစာရလိမ့်မယ် "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်ဘူး" ။ ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနှင့်သင်ဖို့ခွင့်ပြုအစားအစာများရရှိနိုင်စေရန်စတိုးဆိုင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပစ္စည်းများအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်ရန်!
Q: ကျွန်မတစ်ဦး WIC အစာကိုဝယ်နိုင်ဖြစ်သင့်စဉ်းစားခြင်းနှင့်သင်တို့ကိုငါပြောပြနေလျှင်ငါ့အအစားအစာကို item ထည့်သွင်းခဲ့သည်မှန်လျှင်, အခါ, ငါသိမလဲ?
A: သင်သည်သင်၏လာမည့်အလည်အပတ်ခရီးမှာကို item scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အနောက်ဗာဂျီးနီးယား WIC Approved စားနပ်ရိက္ခာများစာရင်း
JPMA, Inc မှဖန်တီးသည် မူပိုင်ခွင့် 2012 - 2019 | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။